Ny lalàna vaovao momba ny fanofana maharitra ao Washington ho an'ny 'milalao kianja ho an'ny hotely eo an-toerana'
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny lalàna vaovao momba ny fanofana maharitra ao Washington ho an'ny 'milalao kianja ho an'ny hotely eo an-toerana'
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Resorts • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny governoran'i Washington, Jay Inslee, dia nanao sonia ny volavolan-dalàna momba ny trano mpisolo toerana 1798, momba ny fanofana tsy maharitra, ho lalàna. Ity volavolan-dalàna ity dia laharam-pahamehana indrindra ho an'ny Washington Hospitality Association nandritra ny fivorian'ny mpanao lalàna 2019. Ity volavolan-dalàna ity dia mitaky fanofana mandritra ny fotoana fohy hametra ny haba rehetra, hitandroana ny fiantohana amin'ny trosa ary ao anatin'izany ny fitsipiky ny fiarovana ny mpanjifa.
"Natolotro ho an'ny kianja filalaovana hotely eto an-toerana ity volavolan-dalàna ity," hoy ny mpanohana ny volavolan-dalàna, Rep. Cindy Ryu, D- Shoreline. “Tahaka ny olona mihabetsaka dia mpividy hofan-trano fialan-tsasatra sy trano fandraisam-bahiny aho, ka zatra mandoa haba mitovy amin'izany rehefa any amin'ny fanjakana hafa. Rariny raha mandoa karazana hetra mitovy amin'izany, na mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny isika na manofa trano vetivety. ”
Ny lalàna vaovao dia mitaky mpandraharaha sy lampihazo fanofana fotoana fohy hisoratra anarana amin'ny Departemantam-panjakana misahana ny fidiram-bola ary hamerina ny hetra rehetra eo an-toerana, fanjakana ary federaly. Zava-dehibe, ny hofan-trano amin'ny fotoana fohy ihany koa dia handoa hetra amin'ny trano fandraisam-bahiny eo an-toerana izay manampy amin'ny fandoavana ny hetsika mifandraika amin'ny fizahantany any amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana manerana ny fanjakana.
"Feno fankasitrahana aho fa ny Antenimieram-panjakana Washington sy ny solontenam-panjakana Cindy Ryu dia mandray fepetra hiantohana ny fiarovana ny olona sy ny mpizahatany mijanona ao Washington ary koa miatrika ny fiantraikan'ny fanofana tsy maharitra amin'ny trano mora vidy ao amin'ny fanjakanay," hoy i Ron Oh, tale jeneralin'ny Holiday Inn Express & Suites North Seattle-Shoreline ary ny lefitry ny talen'ny fikambanan'ny mpitsabo arahin'asa Washington ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny komity misahana ny raharaham-panjakana.
Ireo mpandraharaha mpampanofa trano ao anatin'ny fotoana fohy dia hanana fepetra vaovao momba ny fiarovana ny mpanjifa vokatr'ity lalàna ity. Ireto fepetra takiana ireto dia misy ny fanomezana ny mpanjifa ny mombamomba ny fifandraisana amin'ny olona iray izay mety hamaly ny fanontanian'ny vahiny mandritra ny fotoana ijanonany sy ny fanarahana ny lalàna fanairana karbônika karbonika. Ireo mpandraharaha manofa trano fohy ihany koa dia mila mandefa ny adiresy an'ny singa mpanofa, ny fampahalalana momba ny serivisy vonjy maika, ny planina misy fivoahana afo sy ny lalan-kivoahana, ny fetra farany azo ipetrahana ary ny fampahalalana momba ny fifandraisan'ny mpandraharaha amin'ny toerana miharihary ao anatin'ny trano fanofana maharitra.
Nandritra ny fizotry ny lalàna, ny volavolan-dalàna momba ny trano mpisolo toerana 1798 dia nampivondrona mpandray anjara marobe hiady hevitra momba ny fitakiana fanofana maharitra ao amin'ny fanjakana. "Betsaka ny tombontsoana mifandraika amin'ity volavolan-dalàna ity," hoy ny Rep. Gina Mosbrucker, R-Goldendale, ary mpanohana io volavolan-dalàna io. “Tamin'ny farany dia niara-nivory izy ireo mba hahazoana marimaritra iraisana. Mankasitraka ny ezaka iarahan'ireo rehetra voarohirohy aho. ”
Faritra iray nifanarahana teo amin'ireo mpandray anjara no manodidina ny fiarovana ny fiantohana amin'ny fiantohana ho an'ireo mpandraharaha sy trano maharitra. Ny volavolan-dalàna farany dia misy fepetra mitaky ny tsy maintsy hananan'ireo mpiofana manofa fotoana fohy fiantohana voalohany farafahakeliny $ 1 tapitrisa handrakofana ny singa fanofana. Ireo mpandraharaha manofa trano fohy ihany koa dia mety hanatanteraka an'io takiana io raha toa ka manao ny fifanakalozana fampanofana amin'ny alàlan'ny sehatra iray izy ireo izay manome fiantohana fiantohana.
"Amin'ny maha-mpiasan'ny fiantohana taloha ahy, faly aho ireo tompona fanofana maharitra ao amin'ny fanjakana Washington dia ampandrenesina ny filan'izy ireo hijerena ireo sarom-piantohana fiantohana alohan'ny hitrangan'izy ireo trosa mety hitranga amin'ny orinasa," hoy i Ryu.
Hanan-kery io volavolan-dalàna io amin'ny 27 Jolay 2019, izay 90 andro aorian'ny fiatoan'ny fivorian'ny mpanao lalàna 2019.